Handuan | Tsika Dzemapuranga Fenicha Vagadziri
Nyanzvi Yekuita Wood Simbi Makenzi MuChina
YAKASIYANA DESIGN STYLE
Iyo yakasarudzika fenicha inogadzira masitayera inonyanyo kuve yakakamurwa kuita yazvino maitiro uye Scandinavia maitiro. Iyo kambani yagara ichishandisa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa uye zvakanyatsosarudzwa, uye zvigadzirwa zvehunyanzvi ndezve kugona.
Tsika Yakagadzirwa Fenicha
Yakasarudzika Uye Yemazuva Ano Dhizaini Dhizaini
Iyo yakasimba yekudzora maitiro inovimbisa iyo ichasangana neiyo chaiyo yakatarwa.
Akanakisa akanakisa mwero wepamoyo kabhodhi yekumaodzanyemba European yeGoor Door Door Porth Shoe Rack Porch Home Porch Shoe Cabinet Suppord Computer Computer - Handuan
Yakanakisa Yemazuva ano Yakanyanya Salm Cabinet North European European Home Door Door Pors Shoe Rack Spee Rack Chengetedza Shoe Cabinet Home Porch Shoe Cabinet Supporfer.Chigadzirwa icho chakavimbiswa chengetedzo. Iyo yakavakirwa-mune yekuchengetedza masisitimu, yakadai sekudzivirira kwekuchengetedzwa, kudzivirirwa zvakadzama, uye kukiya kwekuchengetedzeka, ita shuwa kushanda kwakachengeteka.Handuan zvakanakisa zvakanakisa mwero wakanyanya kupusa kabhodhi yekumaodzanyemba European DEGE Door Porth Shoe Cabinet Home Porch Shoe Cabinet Suppord Computer Computer - Handuan
Tafura yekofi yekofi
Inoshanda yekofi yekofi.
Tafura yepadivi pemubhedha.
Mukutsvaga kwechigadzirwa uye kusimudzira, kambani ine nyanzvi uye yakanakisa R
<$>> D timu, inobatanidza R& D, kugadzirwa uye kutengesa.
Zvigadzirwa zvekambani zvinosanganisira suite dzakateedzana, yekutandarira mitezo, yekudyira akateedzana, evana akabatana mubhedha akateedzana, enjiniya furati hotera package, uye imba yese tsika tsika. Iwo makuru prodcts ndeemapuranga ekurara fenicha nhevedzano, kusanganisira yemapuranga mubhedha wakapetwa uye wadhi yemapuranga. Chigadzirwa chekambani chimiro chinonyanya kuve chakakamurwa kuita chazvino chimiro uye cheNordic maitiro. Iyo kambani yagara inoshandisa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa uye yakapfuudza Zvakasarudzika kusarudzwa, kukwana kwehunyanzvi zvinodiwa, ine yakasarudzika dhizaini dhizaini, yakasarudzika mhizha, uye nemoyo wese sevhisi, yakahwina nyasha yevatengi, yakahwina anopfuura gumi nyika chitarisiko uye inoshanda nyowani dhizaini patent, uye akazova ekutanga dhizaini yezvigadzirwa zvigadzirwa Mutungamiriri.
Mazuva 45 anodzoka
3 makore garandi
Mazuva makumi mapfumbamwe ekuchengetera mahara
250 kugoverwa kwemaguta
Foshan Handuan Furniture Co., Ltd. hwakagadzwa muna 2012.
Inowanikwa muLecong, Shunde, Foshan, Guangdong, China, inova hwaro hwepasi rose hwekugadzira fenicha. Makuru-emahara emazuva ano akajairwa mashopu uye boka remhando yepamusoro yemanejimendi manejimendi, ikozvino ine hwaro hwekugadzira hwazvino hwe 10,000 metres metres, varipo vashandi vevanhu zana, kambani inosuma epamba anozivikanwa maronda uye zvimwe zvigadzirwa zvemberi zvekugadzira michina kuona chigadzirwa chemhando yepamusoro Nekuda kwemamiriro ekuberekwa, kambani ine hunyanzvi uye yakanakisa R
& D timu mukutsvaga kwechigadzirwa uye kusimudzira, uye nehunyanzvi timu yekushambadzira uye yakakwana nzira yekutengesa mukushambadzira, inosanganisa R& D, kugadzirwa uye kutengesa.
Masitayera ekambani yechigadzirwa anonyanya kuve akapatsanurwa kuita echinyakare masitayera nemaNordic masitayera. Iyo inopisa yemapuranga yekurara fanicha ine huni mbiri mubhedha newadhi yemapuranga. Iyo kambani yagara ichishandisa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa uye zvakanyatsosarudzwa. Maitiro acho anodikanwa, uye yakasarudzika dhizaini dhizaini, hunyanzvi hwekugadzira uye basa rechokwadi rakakunda ruzhinji rweVatengi vanofarirwa, vakahwina anopfuura gumi nyika chitarisiko uye chishandiso modhi dhizaini pateni, uye vakave mutungamiri mukugadzirwa kwekutanga kwemaindasitiri zvigadzirwa.
Namatira kune inotungamira ideology yeergonomics, hutano uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.
Professional Kureba mubhedha newawararail mubhedha mubhedha mwana mubhedha mubatanidzwa mubhedha wemwana mubhedha wakajeka mubhedha mubhedha multifunctional mubhedha mubhedha vagadziri
Handuan muNo.19, Kangtai South Road, block B, Shatou Industrial Park, Jiujiang Town, Nanhai District, Foshan City Main zvigadzirwa Height bed ne guardrail bunk bed mubhedha wemwana mubhedha mubhedha mubhedha wemubhedha mubhedha mubhedha mubhedha wakawanda multifunctional bunk bed. Handuan inogadzirwa uchishandisa yakasimba simba rehunyanzvi, michina yemhando yepamusoro. Iyo ine jira rakasimba uye rakasimba rinochengeta kupenya uye chimiro kuti uve nechokwadi chekupedza kutarisa kweimba yekurara uye kurara kwakanaka kwehusiku. Handuan yakaedzwa kuenzanirana kugadzikana, mashandiro uye kukasira kwemavara kuti isangane nezvinodiwa pamutemo wekudyara indasitiri.
Yemazuva ano minimalist tafura yemabhuku kabhineti yakasanganiswa yekunyora yekupfeka tafura yeNordic yekumba komputa tafura uye cheya mubatanidzwa kudzidza fenicha
Handuan muNo.19, Kangtai South Road, block B, Shatou Industrial Park, Jiujiang Town, Nanhai District, Foshan City Main zvigadzirwa Mazuva ano minimalist tafura kabhuku kabhineti yakabatanidzwa kunyora yekupfeka tafura Nordic imba tafura yemakomputa uye cheya mubatanidzwa kudzidza fanicha. Foshan Handuan Furniture Co, Ltd. inoshandisa mhando yepamusoro seyakakura zvinhu. Chigadzirwa chinoratidza kutendeseka kunodiwa. Dzimba dzayo dzakasimba dzinotora zvigadzirwa zvepamusoro-soro uye zvekudzivirira zvinhu kudzivirira chero kushamisika. Yedu Handuan inogona kugadzirwa mune akasiyana dhizaini dhizaini uye maratidziro.